कोठामा थुनिएको करोडौँ मूल्यको रक्तचन्दन कहिले खोल्ने ? – मुलधार न्युज
Home > समाचार > कोठामा थुनिएको करोडौँ मूल्यको रक्तचन्दन कहिले खोल्ने ?
कोठामा थुनिएको करोडौँ मूल्यको रक्तचन्दन कहिले खोल्ने ?
१७ कार्तिक २०७५, शनिबार ०७:२५
भद्रपुर –एक दशक अघि भारतवाट अवैध रुपमा नेपाल भित्र्याउदै गर्दा वरामद गरीएको करोडौँ मूल्य बराबरको रक्तचन्दन डिभिजन वन कार्यालय झापाको कोठामा थन्काइएको छ । सरकारी निती स्पष्ट नहुँदा प्रष्ट कानूनको अभावमा लिलाम प्रकृया अगाडी वढ्न नसकेका कारण वरामद गरीएको १९ हजार ८ सय ३२.२७ किलो रक्तचन्दन कोठा भित्रै थन्किएको हो ।
प्रहरीले विभिन्न मितिमा भारतवाट ल्याउदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरी वन कार्यालयमा वुझाउने गरेको हुँदा त्यसको संरक्षण गर्ने जिम्मा वन कार्यालयले पाएको थियो । रक्तचन्दनको कारोबार मुलुक भित्र नहुने भएको हुँदा यसको वजारभाउ कति हो भन्ने यक्किन नभएपनि करीब एक करोड ५२ लाख हुन आउने विज्ञहरुले अनुमान गरेका छन् ।
सरकारले प्रकाशित गरेको राजपत्रमा प्रतिकेजि ८ सय तोकिएको भएता पनि भारतबाट लुकिछिपि नेपालको वाटो हुदै चीन जाने रक्तचन्दनको मूल्य नेपालको भन्दा कयौँ गुणा वढी भएको जानकारहरु वताउँछन् ।
वन कार्यालय झापाको कार्यकक्षमा थन्किएको रक्तचन्दनको सरकारी भाउ भने १ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको कार्यालयले जनाएको छ । वरामद गरीएको रक्तचन्दन के गर्ने भन्ने स्पष्ट कानून नभएका कारण समस्या भएको डिभिजन वन कार्यालय विष्णुलाल घिमिरेले वताए । उनले रक्तचन्दन कार्यालयको कोठामा सुरक्षीत रहेको वताउदै सरकारको स्पष्ट नीति नआए चन्दन कोठामा नै सडने अवस्थामा पुगेको वताउँछन ।
यो समस्या नेपालभर नेै रहेको उनले बताए । कार्यालयले वन विभागमा पटक – पटक लिखित पत्र पठाउदा समेत कुनै निर्देशन नआएको उनले वताए । अन्तराष्ट्रिय कानून आकर्षित हुन सक्ने भएकाले पनि विभागले ढिलाई गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
भारतको आन्ध्रप्रदेश र उडिसाहुँदै विहारको किशनगञ्ज जिल्ला डिगलबैङ्क नाकाबाट भित्रिएको एपी २७ डब्लु ओ ४०५ नम्बरको भारतीय नम्बरको ट्रकबाट गत ०६३ पुस ३ गते भारत चेन्याँइका यम भाष्कर र राजु भाष्करले भारतवाट ल्याउदै गरेको अवस्थामा झापाको टाघनडुव्वाबाट ३ सय ६२ थान (६ हजार ३ सय ७५दशमलव २७ किलो ) ,०६४ जेठ २१ मा टाँघनडुव्वा ८ का गुलाम रसुल मियाले चीन लैजाने तयारी गर्दै गरेको अवस्थामा ६५ थान (१ हजार ६ सय ८७ किलो) त्यसको भोलिपल्ट सोहि स्थानबाट सुवास चौधरी, उपेन्द्र चौधरी, अभिनाश चौधरी र रामजतन चौधरीको घर परिसरबाट ३ सय ९९ थान (११ हजार ७ सय ७० किलो) प्रहरीले वरामद गरेको थियो ।
घटना पश्चात झापा जिल्ला अदालतले भाष्कर द्धयलाई वन ऐन २४९ को दफा ४९ (घ) को कसुरमा जनही ३ लाख १८ हजार ७ सय ६३ रुपैया जरिवाना र एकवर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । मियाँलाई २६ लाख ९९ हजार २ सय जरिवाना र ६ महिना कैद र अन्यलाई जनही १ करोड ८८ लाख ३२ हजार विगो र चार वर्ष कैद सजाय भएको थियो ।
उक्त रक्तचन्दन तस्करीमा संलग्न भएको अभियोगमा पक्राउ परेका व्यक्ति भने कैद र जरिवाना भुक्तान गरी रिहा भइसकेका छन् । बरामद गरिएको ट्रक पनि लिलामी प्रक्रियाबाट बिक्री भइसकेको छ ।
दुईवटा कोठामा रक्तचन्दन राखी शिलबन्दी गरिएकोले कार्यालयको काम कारबाहीमा पनि कठिनाई भएको कार्यालयका कर्मचारी बताँउछन् ।
पक्राउ गर्नेले काम देखाउन हतारमा कार्यकक्षमा राखेर हिडेपछि सेवाग्राहीका कागजपत्र समेत थुनिएको एघार वर्ष भएको एक कर्मचारीले बताए । ‘ती कोठामा जनताका कागज छन्, चन्दनले गर्दा जनताको काम रोकिएर समस्या भएको छ’ । ‘चन्दन त सडिसक्यो होला ,कागज पत्रको के हालत भयो ?उनले भने । ’
गोदाममा २ कोठा मध्ये एउटामा तत्कालीन नेकपा माओवादी झापा र जिल्ला वन कार्यालयले दोहोरो ताला लगाएका छन भने एउटामा वन कार्यालयको मात्र ताला छ । दुवै गोदाम हाल सम्म एक पटक पनि नखोलिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
वनस्पति तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन तथा अन्तराष्ट्रिय कानून बमोजिम रक्तचन्दनको कारोबार एक देशबाट अर्को देशमा गर्दा दुबै देशको सहमति हुनुपर्ने प्रावधान छ । सोही ऐन तथा अन्तराष्ट्रिय कानून विपरीत चोरी पैठारी गरी भारतबाट नेपाल भित्र्याइएको रक्तचन्दन झापामा बरामद गरिएको थियो ।नेपाल समाचारपत्र
शंकाको घेरामा रहेका कसैलाई नछाड्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
खरिदार विदुर पोखरेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता
कुमार पौडेल मुठभेडमै मारिएको गृहमन्त्री थापाको दाबी